Xiddiglaha Dalxiiska ee Hal -abuurka leh Tollman wuxuu Dagaalkii Kansarka ku waayey 91
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Xiddiglaha Dalxiiska ee Hal -abuurka leh Tollman wuxuu Dagaalkii Kansarka ku waayey 91
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Faransiiska • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Daalacanayo Hadda
Aragtida warshadaha dalxiiska caalamiga ah, ganacsade, iyo deeq-bixiye Stanley S. Tollman, aasaasaha iyo guddoomiyaha Shirkadda Socdaalka (TTC), kooxda socdaalka caalamiga ah ee aadka u guulaystay oo ka kooban in ka badan 40 nooc oo abaalmarin ku guuleystay oo ay ka mid yihiin Trafalgar, Fasaxyada Insight, Fasaxyada Contiki, Carnation Cas Huteelada, iyo Uniworld Boutique River Cruises, iyo hormuudka dhaqdhaqaaqa socdaalka waara iyada oo loo marayo TreadRight Foundation oo aan macaash doon ahayn, ayaa dhintay kadib markii uu la dagaalamay kansar. Wuxuu ahaa 91.
Waxaa loo dabaaldegay inuu yahay naqshadeeye warshadaha socdaalka ee casriga ah, Tollman wuxuu u suuro galiyay tobanaan milyan si ay adduunka u ogaadaan iyada oo loo marayo faylalka sumcadaha safarka.
Waxaa laga yaabaa in sida ugu wanaagsan loogu xusuusto inuu yahay aabbaha la jecel yahay iyo wakiilka qarnigii hore, qoysku lahaa oo ganacsi maamulay.
Maanta TTC waxay leedahay in ka badan 10,000 oo shaqaale ah, oo u fidisa martigelin aan loo dhigin martida ku kala nool 70 dal oo adduunka ah.
Wiilka muhaajiriinta Lithuania ee Yuhuudda ah oo ka baxsaday naftooda nacaybka nacaybka ee Czarist Russia, Stanley Tollman wuxuu ku dhashay tuulada yar ee kalluumaysiga Koonfur Afrika ee Paternoster oo ku taal Western Cape halkaas oo waalidkiis ay ka hawlgaleen hudheel suubban oo leh musqulo dibadeed iyo halkaas oo Tollman dhallinyaro ah uu ku lugayn jiray kabo la’aan isagoo nuugaya diirimaadka iyo anshaxa shaqada ee qoys u heellan soo -dhoweynta.
Aabihiis Solomon Tollman wuxuu ugu yeeray daryeelka qoyska ee macaamilka qiirada leh 'oo ay waddo adeeg' iyo habkan, oo ay weheliso raacitaan heer sare ah, waxay noqon doontaa astaanta shaqada nolosha Stanley Tollman, cashar iyo falsafad waarta xirfadda iyo ku abtirsaday jiilalka Tollmans ee sii wadata raadkiisa.
Wiil Afrikaan Ah Oo Indhihiisa Ka Sameeya Dunida
Sannadkii 1954, Stanley Tollman wuxuu guursaday Beatrice Lurie, isagoo bilaabay sheeko jacayl iyo iskaashi joogto ah. Iyaga oo la wadaagaya xiisaha soo dhaweynta gaarka ah, lammaanaha da'da yar waxay u isticmaaleen lacagtii arooskooda inay ku iibsadaan hantidoodii ugu horreysay - Nugget Hotel ee Johannesburg.
Tollman wuxuu u shaqaynayay si hagar la’aan ah, oo uu kaxaynayey baadi -goobkiisa hagar la’aanta ah ee gaajada iyo gaajada si uu saamayn ugu yeesho Koonfur Afrika iyo, haddii ay suurtogal tahay, adduunka. Fursaddu waxay timid 1955 markii maalgashigii labaad ee Tollman, The Hyde Park Hotel, oo ah huteel dabaq ah oo ku yaal Koonfur Afrika kaas oo aasaasay magaca Tollman si uu u noqdo astaan ​​heer sare ah isla markaana ku kaydiyey hoteelka da 'yar si uu caan u noqdo.
Beerta Hyde Park, Stanley iyo Bea waxay ka wada shaqeeyeen iskaashi dhow, iyada oo Stanley uu mas'uul ka ahaa guriga hortiisa halka Bea ay ka shaqayneysay muuqaalka, oo noqotay haweeneyda kaliya ee madaxa kuugga Koonfur Afrika waqtigaas. Fikraddooda qolka cuntada ee saxeexa hudheelka, Restaurant Colony ayaa dib u qeexday weynaantii isla markiiba waxay noqotay dareen madadaalo leh. Tollman wuxuu u safray adduunka si uu u soo bandhigo falalka cabaret -ka caalamiga ah ee dabaaldega ah si uu halkan uga sameeyo, taasoo kor u qaadaysa soo -gaadhista Koonfur Afrika ee fannaaniinta caalamiga ah ee dheesha iyo muusigga. Waa kii ugu horreeyay ee ku soo dhoweeya fanaaniinta caanka ah iyo dadka caanka ah sida Marlene Dietrich iyo Maurice Chevalier iyo shaqaalaha filimada - oo ay ku jiraan filimkii taariikhiga ahaa ee Stanley Baker “Zulu” ee uu jilayay Michael Caine - Koonfur Afrika 1950 -yadii iyo 60 -meeyadii.
Sumcadda Tollman ee heer sare waxay korodhay markii la hirgeliyey Tollman Towers, oo ah hoteelkii ugu horreeyey ee shan-xiddigle ah, oo Koonfur Afrika ah, waxaana ku xigay hawlgalkii ugu horreeyey ee warshadaha socdaalka iyadoo la iibsaday Trafalgar Tours sannadkii 1969. Tollman wuxuu ahaa il feejignaan u leh hawlgallada iyo habka cusub si aad u hesho socdaal qoto dheer wuxuu u rogaa shirkadda safarka yar, midda curdanka ah mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan summadaha safarka adduunka oo leh in ka badan 80 abaalmarin illaa maanta. Trafalgar ma aha oo kaliya ballaarinta haysashada Tollman ee ka baxsan hudheelada, laakiin suuqyada safarka adduunka, taas oo waddada u xaaraysa abuurista Shirkadda Socdaalka sida ay maanta tahay.
Iyadoo la tixraacayo Tollman oo ah oday caalami ah oo la ixtiraamo, Sir Geoffrey Kent, Aasaasaha, Isuduwaha iyo Maamulaha shirkadda safarka raaxada Abercrombie & Kent ayaa yiri:
Dea Adria Mallin wuxuu leeyahay,
Nofeembar 18, 2021 at 11: 30
Abaalmarintii Linda Hohnholz ee Stanley Tollman ee hadda dhintay ayaa u keentay nolosha! Waa maxay bani aadam aan caadi ahayn. Waa maxay u heellanaanta hufnaanta, naxariista, isku duubnida dhammaan bini'aadamka marka kuwa kale ay qaybinayeen oo ay ka adkaanayeen kor u qaadis iyaga u gaar ah, iyo waxa gacan ka geysanaya warshadaha safarka si ay si qoto dheer u kobciyaan awooddeeda, ujeeddaduna tahay wadaagista hantida ereyga, ilaalinta mustaqbalka. jiilal, iyo horumarinta waayo-aragnimada safarka malaayiin. Mahadsanid, Linda. Waad ku mahadsan tahay, Stanley Tollman.